Indawo ezigqibeleleyo Chinese EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Indawo ezigqibeleleyo Chinese EYurophu
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 10/01/2020)
Okwavela okuneziqholo nemibuzo flavour amangalisayo, ukutya okulungileyo Chinese kukuba ngamanye amaxesha kunzima ukufumana eYurophu. kunjalo, iindaba ezimnandi kukuba kukho zokutyela ebonakalayo Chinese eYurophu - kufuneka wazi apho uzifune, kwaye indlela apho. Ekubeni uninzi lwazo kwizixeko ezinkulu yaseYurophu okanye izihloko, Kungangcono ukuba fika ngololiwe.
nge aphuhliswe kakuhle inethiwekhi Uloliwe fast ukuba iYurophu inama, ke kunokwenzeka ukuba naphi na umbandela kweeyure - laneliswe iindlela ebukekayo endleleni ngokunjalo. Kwabo kuni ifuna ezityiwa ukutya Asia, apha zokudlela best Chinese eYurophu, kwaye indlela apho ngololiwe:
Sea Palace - Amsterdam, elamaDatshi
iivenkile ezininzi swi ngokunika umthengi into enkulu ukunambitha. kunjalo, i Palace Sea e Amsterdam ijolise zikunike amava ukuba bazibandakanye nje ungcamla incasa kodwa kube lula phezu kwamehlo. Yakhelwe njenge Pagoda, lo restyu lencopho yindawo egqibeleleyo ukuphumla ngenxalenye ukudla okulungileyo Chinese apho phandle.
Rice izitya, amadombolo, namnandi, adlula spring - nawe igama it, ke ukuba zonke kwi menu kwaye ukungcamlisa ezizizo ngokungathi e China. Nantso into elindeleke ukusuka enye zokutyela best Chinese eYurophu. Ukuba unqwenela ukufumana ku Amsterdam ngololiwe, Unga ukubamba ukukhwela eParis train, Berlin, kunye nezinye imizi yaseYurophu.
Hanover ku Amsterdam Uqeqesha
Abahlobo Abalungileyo kunye Indawo ezigqibeleleyo Chinese eYurophu - Berlin, Jemani
Kwisixeko swi-ngokupheleleyo zokudla Chinese, kokuba kuthiwe enye zokutyela best Chinese eYurophu ibamba ukubaluleka ekhethekileyo. kulizwe Kantstrase, e Chinatown eBerlin kaThixo, Abahlobo elungileyo indawo uqhayisayo i menu olubanzi kunye nokutya authentic ethandwa ngabo bobabini kwamanye amazwe yaseTshayina abakhenkethi.
Akuyi kuba kulungile ukuba undwendwela Abahlobo Abalungileyo xa eBerlin. ukuze ukufika Berlin, ungangenisa uloliwe evela nakuwuphi na isixeko enkulu eYurophu ube khona kwisithuba seeyure.
Dortmund ku Berlin Uqeqesha
Dusseldorf ku Berlin Uqeqesha
Dresden ku Berlin Uqeqesha
Liya Berlin Uqeqesha
Hangzhou - Rome, ElamaTaliyane
Xa sicinga Italy, sasidla musa ukudibanisa ku ukutya Chinese. Ukuba uvakalelwa ngendlela efanayo, mhlawumbi uya kumangaliswa kukufumanisa ukuba abantu abavela ukwenza ube ukhakhayi ngokuba ukudla Chinese. Kwaye enye zokutyela best ukutya Chinese eYurophu, Hangzhou, ngokuqinisekileyo kubonisa ukuba ibango.
Lufaka ezinye iimpembelelo Italian, kodwa uninzi menu ikukutya authentic Chinese ukuba umele uzame Ukuba uzufumana urholela eRoma. Tour Italy ngololiwe ukwenza ukuba kwenzeke, okanye ukuthatha uloliwe ukuze eRoma ukusuka kwenye zeengqukuva European.
Nikeza Du Dragon Yebo phakathi Indawo ezigqibeleleyo Chinese eYurophu - Brussels, Bheljiyam
Enye yokutyela inama ingaphakathi kumnandi kunye noyilo egadini kunye izitya zayo emangalisayo, Nikeza Du Dragon e Brussels ubizwa unelungelo wabiza omnye zokutyela best Chinese eYurophu. with phezu 300 izihlalo kunye igadi olugqibeleleyo zokuhomba, uya kuziva ngathi wangena iphupha efanelekileyo Oriental. Nasiphi na isitya iyamangalisa, kodwa siza ngokukodwa mali norhatyazo kunye ngumpheki indlu, Peking uyida-, izinto ezimbini kufuneka uzame xa sele ukuya eBrussels ngu loliwe.
Bruges ku Brussels Uqeqesha
Maastricht ukuya eBrussels Uqeqesha
Halle ukuya eBrussels Uqeqesha
EGhent ukuya eBrussels Uqeqesha
Ngo Chinatown e Vienna, China Kitchen No. 27 isoloko okhankanywe njengomnye best. Ukuba ungathanda elinongwe ukutya kwakho, le ndawo. Kwakhona kunikela ezinye izitya ngakumbi ezingaqhelekanga, ezifana ngwane isaladi, Nangona sicebisa Gong Bao chicken ukuba ufuna unamathele kunye ezakudala. Unga lula ukuhamba uye eVienna ngololiwe ukusuka ezininzi kwizixeko ezinkulu yaseYurophu, ukuze ungaphoswa elo thuba.
Dortmund eVienna Uqeqesha
Dresden eVienna Uqeqesha
Heidelberg eVienna Uqeqesha
Dusseldorf eVienna Uqeqesha
Ukulungele isampula izitya yezandla ezinye zokutyela best ukutya Chinese eYurophu? Incwadi amatikiti etreyini yenu, yaye hop kuloliwe ukuba akuzeke enkulu adventure yakho elandelayo yikuphi.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chinese-restaurants-europe/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu, kule linki uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml – ngaphakathi ukuba unxibelelwano lwethu kunye / en / kodwa unako ukuyitshintsha ukuba / fr / okanye / de / okanye / ngayo / kwiilwimi ezininzi
#asianfood #BestChineseRestaurants #chinesefood europetravel tips uloliwe train Travel uhambo ngololiwe